EDITOR LETTER | Food Magazine Myanmar
Food Magazine ပရိသတ်ကြီးအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ မိုးရာသီဆိုတော့ ရာသီပေါ်အစားအစာလေးတွေ ပေါသလို ရာသီပေါ် တုပ်ကွေးတွေလည်း ဖြစ်နေကြတော့ အထူးဂရုစိုက်ကြပါနော်။ “ဝါဆို-ဝါခေါင် ရေဖောင်ဖောင်” ဆိုတဲ့ စာဆိုအတိုင်း မိုးတွေကလည်း အဆက် မပြတ်ရွာသွန်းနေတော့တာပါပဲ။ အဲဒီလို မိုးတွေရွာပြီဆို အပြင်ထွက်ရမှာ ပျင်းလို့ မထွက်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစားအသောက်အတွက်ဆို ....
Food Magazine ပရိသတ်ကြီး မင်္ဂလာပါ။ မိသားစုအတွက် တစ်နေ့တစ်နေ့ မရိုးရအောင် စီမံချက်ပြုတ်နေရတဲ့ အိမ်ရှင်မများနဲ့ အစားအသောက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ တိုင်းအတွက် အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့နဲ့ ဟင်းချက် လက်ရာ၊ အစားအသောက်အာဟာရ၊ ကျန်းမာရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ အားလုံးအတွက် မိုးအေးအေးလေးနဲ့အတူ ဇူလိုင်လထုတ် Food Magazine ....
Food Magazine ပရိသတ်ကြီးရေ… ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီ ကလည်း ဧပြီလထက် ပိုမိုပူပြင်းလာပါပြီနော်။ ရှေးလူကြီးသူမတွေ ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့ “တန်ခူး- ကဆုန် စွေ့စွေ့ခုန်” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ပါပဲ။ ဧပြီလမှာ အတာသင်္ကြန်ရေနဲ့ အေးချမ်းခဲ့ပေမယ့် မေလက အလွန်ပူပြင်းတာကြောင့် အစားအသောက်တွေကို ရွေးချယ် စားသောက်ရာမှာလည်း ....
Vol 8, No 4, April, 2019 Issue
အယ်ဒီတာ့စကား Food Magazine စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ… မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အခါသမယမှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဦးစွာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။ ဧပြီလဆိုတာကတော့ မြန်မာတို့ရဲ့ ၁၂ လ ရာသီထဲမှာ ပထမဆုံးလဖြစ်တဲ့ တန်ခူးလဖြစ်ပြီး နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကို ကူးတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး စည်ကား ....
အယ်ဒီတာ့စကား မင်္ဂလာပါ Food Magazine ပရိသတ်ကြီးရေ . . . ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီကို ရောက်လာပြီဖြစ်တာမို့ စာဖတ် ပရိသတ်ကြီးလည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြပြီပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ဒီလိုပူပြင်းတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မယ့် အနေအထိုင်နဲ့ အစားအသောက်တို့ကို အထူးဂရုစိုက်ကြပါလို့ သတိလေးပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ ယခုမတ်လထဲမှာ ထူးခြားတဲ့တပေါင်းလပြည့်နေ့ရှိပြီးတော့ ....
Vol 8, No 2, February, 2019 Issue
မင်္ဂလာပါ Food Magazine ပရိသတ်ကြီးရေ . . . ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ တပေါင်းပွဲတော်၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နဲ့ ချစ်သူများနေ့တို့ရှိနေတာကြောင့် တစ်လလုံးမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေက ဆက်နေတော့မှာပါပဲ။ အခုလို အအေးဓာတ်ကျန်နေသေးတဲ့ တပို့တွဲလမှာ မြန်မာတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်တဲ့ ထမနဲပွဲတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံ နေရာဒေသမရွေး ကျင်းပနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ....
အယ်ဒီတာ့စကား Happy New Year ပါနော်။ Food Magazine စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးရေ… နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။ ဒီနှစ်သစ်မှာ Food Magazine စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးနှင့်တကွ ကြော်ငြာရှင်ကြီးများ၊ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါဝင်ရေးသားခဲ့ကြ၊ ရေးသားနေကြတဲ့ စာရေးသူ အစ်ကို၊ အစ်မ၊ မောင်နှမများ အားလုံး ....
Vol 7, No 12, December, 2018 Issue
Happy December ပါ Food Magazine ပရိသတ်ကြီးရေ…။ ဒီဇင်ဘာလဆိုတာကတော့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးလဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကို အစပြုမယ့် နောက်ဆုံးလရဲ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်းတွေစုပြီး မုန့်တွေလုပ်စားကြတယ်။ မိတ်ဆုံစားပွဲ လေးတွေလုပ်ပြီး ပင်ပန်းခဲ့သမျှ ဘဝအမောတွေကို ဖြေဖျောက်ရင်း နှစ်သစ်ကို ....
Vol 7, No 11, November, 2018 Issue
Food Magazine ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သလိုက်ပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်မှာ မိမိတို့ရဲ့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီး အခု ဒီလတန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်မှာလည်း ဆက်လက်ပြီး ပျော်ပွဲရွှ့င်ပွဲတွေကို ဆင်နွဲကြဦးမှာပေါ့နော်။ တန်ဆောင်တိုင်လည်း ရောက်ပြီဆိုတော့ နေရာဒေသအသီးသီးနဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ ....
Food Magazine စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး မင်္ဂလာပါရှင့်…။ သီတင်းကျွတ်အခါသမယဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက တန်ဖိုးထားပြီး ကျင်းပနေတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ လတစ်လလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်တိုင်းရှိ လမ်းတိုင်းလိုလိုမှာ မီးရောင်စုံတွေကို စုံညီအောင် ထွန်းညှိကြပြီးတော့ စတုဒိသာ လိုက်စားရင်း ကံစမ်းမဲလေးတွေ လိုက်နှိုက်ကြတာကလည်း သီတင်းကျွတ်လရဲ့ ....
စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ… ဟိုတစ်လောက Food Magazine Eating Out ကဏ္ဍအတွက် ရိုးရာဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောနေကျ စကားအတိုင်းဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ ပြည်ပသားတွေကို အစားအစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြစရာြွကားဝါစရာ ဆိုင်ကောင်းကောင်း အင်မတန်မှ နည်းလှပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကိုရောက်ပြီး ....
Vol 7, No 8, August, 2018 Issue
မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ရမယ့်အချိန် ရောက်လို့လာပြန်ပါပြီ . . . ကျန်းမာချမ်းသာကြပါရဲ့လားဗျာ… ဒီတစ်လအတွက် အယ်ဒီတာ့စကားကို ရေးရတော့မယ်ဆိုတော့ အရင်လို ကျန်းမာရေးကိစ္စ သတိပေးစာလေး ရေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရာသီအကြောင်း အဖွဲ့အနွဲ့လေးရေးမလား၊ ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ်တွေများ ရေးမလားလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ အခုလိုလတွေမှာ ....